Finesse: Isa, Wedzera Zvigadzirwa, Ita Mari. | Martech Zone
China, July 2, 2015 Chitatu, July 1, 2015 Douglas Karr
Isu tese takashandiswa kune yakajairwa ecommerce kumisikidza iyo inosanganisira zvigadzirwa zvigadzirwa nemataira ezvigadzirwa uye akajairwa zvigadzirwa mapeji ane mamwe mafoto, tsananguro uye ongororo Izvo zviitiko zvekare zvekutenga zviri kutsiviwa nezviitiko zvakanaka zvekutenga zvinosanganisira zvese maficha eakanaka zvemukati system nekurongeka kugona kweecommerce system.
The Musoro weFinesse nokuti WooCommerce muenzaniso wakakwana wechizvarwa chitsva chezviitiko zvekutengesa.
Finesse ndeye WooCommerce dingindira iro rinoitwa kutengesa. Yakagadzirwa kubva pasi kumusoro kuti ive yakanaka, inochinjika uye yakanaka pakutendeuka. Kana iwe wagara uchida kuti ukwanise kutengesa zvigadzirwa zvako nenzira yako, Finesse ndiwo dingindira rako!
Akakosha maficha eiyo Finesse theme kubva kuShop Dhizaini
Simple Setup - Isa Finesse, wedzera logo yako uye tanga kuwedzera zvako zvemukati.
Zvemukati Zvidhinha - Wedzera mabhuroko ane mamiriro akasimba akafukidzwa nekopi yako yekutengesa kukwevera vatengi vako mukati. Gadzira kubatana navo uchishandisa vhidhiyo.
Zvichienderana Widgets - Isa zvigadzirwa kwaunoda, kana kusiya zvikamu zvausingade. Iwe hauna kuganhurirwa kune yakasetwa dhizaini.
Unlimited Kumhara Mapeji - Gadzira akawanda mapeji ekumhara sezvaungade kuve nawo. Gadzira peji rakanangana neese eako akakosha ekutsvaga mazwi. Nenzira iyoyo vashanyi vanobva kuGoogle vanoenda chaiko kune izvo zvavanotsvaga.
famba - yakagadzirirwa kubva pasi kusvika kumusoro pane zvidiki uye hombe screen saizi. Ndiyo theme isingawanzo inoita zvese mushe.
Shanduko Yakagadziridzwa - bvisa kufamba uye widgets pane ma checkout kuti uve nechokwadi chekuti vashandisi havadzvanye kure vasati vapedza kutenga kwavo
zvinenge - yakagadzirirwa kutsanya peji kurodha nguva yekuvandudza zvese kutsvaga nekushandurwa.
Sezvauri kuona pazasi, iwo unoshamisa dingindira:
Kuzivisa: Isu tiri mubatanidzwa we Zvitoro Zvitoro.
Tags: kupedzisadhizaini dhizainiwoocommercewoocommerce madingindira